Mpanefy famatsiana fampirimana kely famatsiana fampirimana ho an'ny tanana
Home / Indoneziana fanasan-tanana / mpanasitrana induction mini / Heater kely fampidirana
Sokajy: Indoneziana fanasan-tanana, Fitaovam-pamokarana famokarana, Fandoroana fampandroana ny induction, mpanasitrana induction mini Tags: mpamahana induction afovoany, Haterina fampitaovana HLQ, induction heater, mpamorona mpanamboatra induction, mpanamboatra induction, mpamatsy fitaovam-pampianarana, mpamonjy hain-trano mini, mpamahana avotra finday, mpanelanelana amin'ny fametrahana, mpamonjy hain-trano kely
Fitaovana malina kely inductor haingam-pandriana kely fametrahana-fitaovana Magnetic Inductor dia mamoaka ny vodin-tsoavaly mikororoka sy manoritra, bolts ary fasteners amin'ny fiara, kamiao, fambolena, fanamboarana sambo.
Ny Mini fantsom-baravarankely famatotra tsy manam-pahaizana momba ny manamboatra-manidina -Mana magnet. KIA-1000W dia mampiasa magnetika induction heating teknôlôjia hampidinana hafanana kely amin'ny fiara, milina, singa metaly isan-karazany ary polyethylene. Ampiasaina indrindra mba hanafana ny bolongam-bolam-boto isan-karazany, tsaramaso, fitaovam-piasana, Pulley, pulley, bearings, sensor, sns. Tsy misy ny lelafo misokatra, tsy tokony hisorohana ireo fitaovana mirehitra isan-karazany toy ny plastika; tsy misy rano miteraka rano, fandidiana milamina, fampiasana tsotra ary mora entina.
Famahana mateza, mora ampiasaina any ivelany sy ao anaty trano. Tsy misy fandoroana, fiarovana fiarovana ny singa hafa, manatsara ny fahombiazan'ny asa. Tsy manimba ireo ampahany akaikin’ilay fanana izany. Tsy hanimba ireo faritra manodidina izany amin'ny alàlan'ny baoty na plastika. Tsy misy afo misokatra. Fitsipika: Ny fampiasana ny fantsom-panala vy sy tsy vy amin'ny faritany elektromagnetika dia afaka mamadika kitapitsoka ho mena fitaovana fanamainana induction ao anatin'ny 20 segondra. Tsy misy ny lafaoro amin'ny afo misokatra. Ny akora sy ny fitaovana vita amin'ny vy sy ny adhesive dia azo atao koa ny mando sy voasaron'ny akora fitaovana. Sehatra ampiasaina: fanalana ny tady fisolanana herinaratra, fanesorana ny fantsom-pamokarana herinaratra avo lenta, fanodinana matevina, fanesorana ireo mpanova, fanesorana skoto amin'ny toerana isan-karazany, fanesorana ireo vovony viny tsy misy solvent na vy, manala ny hose sy AC , famonoana sy fanitarana ny sombin-tariby Ny fanamaintana ny fehikibo dia manamora ny fametrahana, ny harafesina ary ny fanesorana ny skoto, ary azo ampiasaina amin'ny fanesorana ireo indostria sy fitaovana isan-karazany.
Ity milina ity dia tsy mety amin'ny fivarotana fiara ihany, fivarotana 4S, fivarotana moto, fikojakojana ny tsipika famokarana, fitazonana mekanika, fikojakojana ny fitaovana ilaina, departemanta fikojakojana, departemantan'ny lozika, fivarotana entana, fa koa amin'ny fanaovana brazing, fanamboarana diamondra. , Fitsaboana ny hafanana amin'ny ampahany kely, metaly kely sarobidy (volamena, volafotsy, sns.) Fanodinana, kely volom-by, ny setroka vy, sns.
Fandroahana ny haben'ny kara-tany vita amin'ny sakamalaho vita amin'ny rusty.
Fitsaboana hafanana amin'ny banga fanakorontanana fiara, tsaramaso, fitaovam-piasana, poleta, palpeta, asio.
Ny fitsaboana hafanana amin'ny fitaovana mavesatra dia milina fanindroana avo lenta, toy ny vise, tantanana, mpanefy.
Ny fanorana sy ny fanesorana ireo tsipika famokarana samihafa, ny fitaovana mekanika, ny singa amin'ny famolavolana.
Fihenan-tsakafo hafahafa mahery vaika fitsaboana fikorahana fitaovana vita amin'ny fitaovam-pamokarana herinaratra.
Ny fanjonoana amin'ny karbônara dia mahita tsofina misy nify lehibe sy kely.
Volafotsy volafotsy, faritra lasantsy, famonosana.
Famandrihana famantaranandro firavaka.
Orinasa elektronika: tariby tena tsara, singa elektronika isan-karazany, tapany tsara, volafotsy ary fametrahana volafotsy.
Indostrian'ny mekanika sy elektrika: vy vy vita amin'ny vy, varahina-volafotsy vita amin'ny moto micro, shafts ary famonoana hafa.
Indostrian'ny tariby: tariby tariby induction aegaling.
Indostrian'ny kilalao: Sarotra metaly manify Clockwork.
Famonosana antsy: antsy vita amin'ny taratasy sy fehin-kiraro.
Fitaovana vita amin'ny hazo isan-karazany, toy ny: famaky, planer ary fitsaboana hafanana hafa
Ny singa hidiran'ny hidi-batana toy ny plunger pump pump, rotor pump, rotor pump, miverimberina lava-bava amin'ny valiny isan-karazany, ny fitaovam-pitaterana fitaovam-pamokarana ary hafainganam-pandeha avo lenta.
Ny fitsaboana hafanana amin'ny milina isan-karazany sy môtô mahery vaika, toy ny: crankshaft, fifandraisana mitambatra, piston pin, camshaft, valve, haingon-trano isan-karazany ao amin'ny boaty, isan-karazany, hazo fantsona isan-karazany, fifindrana avo làlan-tsetroka famonoana haingana ny fikosoham-bary, akora maro isan-karazany. antsy fihodinam-bongo kely, sandry rocker maro, sima rocker, sns.
Ity vokatra ity dia azo hafanaina hatrany amin'ny 800 degre eo noho eo, tsy misy ny lelafo mivoatra, tsy misy rano mangatsiaka takiana, ary ny fandidiana dia mety.
Raha tsy simba amin'ny fikendrena na tsy mandeha amin'ny laoniny, dia azo antoka ny vokatra mandritra ny 1 taona
Herin'ny asa Single phase110v, 50Hz / 60Hz
220V dingana iray, 50Hz / 60Hz
Ny isan-karazany ny herinaratra miasa 100V-120V
Herin'ny famoahana 1KW
Fiovan'ny toetr'andro 30-100KHZ
Fitsipika ankehitriny 10A
Fomba mangatsiaka Fangatsiahana rivotra
Teboka fiarovana ny mari-pana 85 ℃
Certification CE ， UL, CCC ， Azo alaina amin'ny COC, POVC
Tsingerin'ny adidy 100%
Size 380mm * 64mm
Ireo kojakoja ireo dia miaraka amin'ny heater Mini Induction.
Dia 30mm Coil 2 farantsa
Dia 40mm Coil 2 farantsa
Dia 50mm Coil 2 farantsa
Ny tariby lava 750mm ho an'ny coil DIY 2 farantsa
Coil ho an'ny fanafanana plà 2 farantsa
Postable Portable Weld Heating System mit Induction
Portable Induction Brazing Units
Lafaoro fanalefahana vy